Setting up WebLogic Cluster and Deploy Application ~ Root Of Info
Setting up WebLogic Cluster and Deploy Application
on January 16, 2022 in Linux with No comments
ဒီ article မှာတော့ weblogic cluster တစ်ခု ဘယ်လိုမျိုး တည်ဆောက်မလဲဆိုတာ ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Cluster တည်ဆောက်ပြီးရင်တော့ application ကို cluster ပေါ်မှာ deploy လုပ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Weblogic ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ Java based enterprise application တွေ deploy လုပ်ဖို့ရန် အတွက် အသုံးပြုတဲ့ product တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Weblogic ကို Oracle မှ ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး Weblogic နည်းတူ တစ်ခြား Java based application server product တွေကတော့ Red Hat Jboss, IBM Websphere နဲ့ Tomcat application server တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Products တွေကို နောက်တစ်နည်းအားဖြင့် middleware servers တွေလို့လဲ ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။ သူတို့တွေက authentication, API managing, application messaging ပိုင်း etc. စတာတွေကို handle လုပ်ပေးပါတယ်။ Weblogic ကတော့ လက်ရှိ ကျွန်တော့်ရဲ့ environment မှာ အသုံးများတဲ့အတွက် မှတ်မိအောင် ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Weblogic ကို အကျွမ်းတ၀င် အရမ်းမရှိသေးပါဘူး။
So, what is weblogic cluster?
Cluster လို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ သိရမှာက reliability, availability တွေအတွက် ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့ application ကို တစ်ခုထက်ပိုတဲ့ node ပေါ်မှာ deploy လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှသာ cluster node 1 down ခဲ့လျှင် node2 ကနေ ဆက်လက်ပြီး handle လုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
What are the prerequisites for weblogic cluster?
1.2x VM for node01 and node02.
2. 1xvCPU for each node is ok but better 2xvCPU.
3. RAM 5gb with SWAP 10GB for each node.
4. RockyLinux 8.4 (or) CentOS 8.4
5. Disk = 60GB (For Both OS+APP)
6, Oracle Weblogic version 12.2.1.4 (edelivery)
7. jdk1.8rpm (not openjdk, must use oracle jdk)
8. Must install libXtst* , libXrender* and xorg-x11-xauth to pop up the installer ( if you are using None GUI OS)
9. Create useraccount called "oracle" and set password
10. Create group called "oinstall" and oracle must be member of oinstall ( Later to use chown -R oracle:oinstall /u01 and chown -R oracle:oinstall /u01/* )
11. Createaseperate directory for weblogic application (Not to mix with OS) /u01
Pls watch WebLogic Video Tutorial on Youtube.
Thanks and Enjoy Reading!!! :)
Follow and Like Root Of Info Page and Root Of Info Youtube Channel.